ac motor motera amidy, 3 motor ac geares ac, ac motor
ac gear motor, 3 phase ac gear motor amidy
Karazan-tsolika vita amin'ny AC
Jiro maotera AC miaraka amin'ny fifehezana hafainganam-pandeha, môtô mandeha akora 3, ac motor ankavanana ankavanana, motor moto miaraka amin'ny famaky, AC motor motor ambany rpm, Moto AC Gear Parallel Shaft, motera Inverter AC Gear, Motera 110V Geared, ac gear motor 6 rpm, ac motor motor 100 rpm, ac motor maotera 60 rpm, AC motor moto 30rpm, Custom AC Gear Motors sns.
Inona ny motera gear an'ny AC?
Ny motera AC dia motera iray izay ampiarahina amin'ny boaty fanentanana na fiara fitaterana mba hanamboaran-tselatra feno ho an'ny fangatahana adidy tsy tapaka, tanjona ankapobeny. . Ny motera AC dia azo namboarina hikirakira entana isan-karazany amin'ny hafainganam-pandeha tsy miova izay Ho an'ny fampiharana mitaky haavon'ny avo lenta. Misy karazany roa ny motera AC ho an'ny dingana telo sy dingana tokana. Ny dingana telo dia ho an'ny indostria maro ary ny iray hafa dia ho an'ny fampiharana an-trano matetika.
Ahoana ny fomba hisafidianana maotera AC?
Avy amin'ny spped, azonao atao ny misafidy motera AC ambany rpm, motera AC AC 12rpm, na motera AC AC 30rpm sns. Avy amin'ny fomba fampiharana, dia afaka mahita motera miaraka amina frein, motera ac ianao miaraka amin'ny fifehezana hafainganam-pandeha na Inverter Duty AC Gearmotor . Avy amin'ny karazan'akanjo dia misy helcial, kankana, bevel sns. Raha kely loatra ny toerana misy anao ka tsy mila mampiasa motera AC, dia mitadiava Motor Geared AC Compact izay namboarina manokana.
Inona ny serivisy mety omena an'i Sogears?
Sogears dia mpanamboatra maotera matihanina ac avy any Shina ary ny ekipanay injeniera dia natao ho an'ny AC GEAR MOTOR & GEAR HEAD ho an'ny mpanjifa vahiny marobe. Miaraka amin'ny teknikan'ny fandrosoana eto amintsika, ny motera AC misy motera dia mahatratra torolàlana hatramin'ny 820,000 lb-in sy ny tahan'ny hafainganana hatramin'ny 13,540: 1 izay mahafaly ny ankamaroan'ny fitakian'ny indostria. Ny tena zava-dehibe dia tsy ny kalitao tsara ihany, fa ny vidin'ny motera AC ambany kokoa.
Ny pejy fanoratana ato amin'ny PDF momba ny AC Gear Motors
Motor maotera AC amidy any Sina
Sary an'ny motera AC
Tongava soa eto aminay mba hahafantaranay ny vidin'ny motera AC.
Ny moto AC AC ambany rpm
motera ac mandeha amin'ny fanaraha-maso haingam-pandeha
Mifandraisa amin'ny vidin'ny motera AC
Motor motor AC 30 hariva
3 motor ac gear motor
Motor motor AC 100 hariva
Fa maninona no mifidy tony?
Mpanamboatra matihanina malaza izahay amin'ny motera AC ary manolotra karazana motera gear izahay amin'ny fampiharana indostrialy isan-karazany miaraka amin'ny fahaiza-manao mahomby kokoa.
Jereo ny moto herinay
Ny fivarotana ny motera elektrika mivantana misy kalitao tsara, 10 hp na 15 môtô HP ohatra.
Jereo ny môtô mijaly 3 phase ac
Fampiharana ac motor sy ny fampiharana azy, motera maotera misy brake
AC motor moto 60 rpm, AC gear motor ambany rpm, Fikarohana mifandray amin'ny reducer haingana
Ny vidin'ny motera AC
Helical Gearbox anatiny | F andiany mifanitsy amin'ny motera mpanamory fiaramanidina matevina
Yantai, Shandong, Sina